ကွီးမွတျလှသော - Myanmar Gospel Songs
Hymns, Contemporary, Praise and Worship
Contemporary / Music
Myanmar Gospel Songs
ထာဝရဘုရားအား အသဈသော သီခငျြးကို ဆိုကွလော့။ မွကွေီးသားအပေါငျးတို့၊ ထာဝရဘုရား အား သီခငျြးဆိုကွလော့။ ဆာလံ၊ ၉၆း၁။
Click here to search Contemporary Hymns Praise and Worship
Click here to search Music Podcast Video
Click here to search Ah Bu Ahdulay-manger Akuk Christmas Contemporary Eden Group English facebook Father's Day FOR God bless Myanmar Hillsong Hymns J3:16 Joy Vid Jမိုး L စတုန်း l ဆိုင်းဇီ L လွန်းဝါ Music music video Myanmar Gospel Songs Myanmar Podcast Mထူး Nဆိုင်းလီ Podcast Praise and Worship S.H.Y Saw Zaw Win Htut SHY - Me And My Family SNO Spy Susanna Min Sတာ Thang Tawng Video Worship ကနဲ ခင်လေးနွယ် ချစ်စမ်းမောင် ချစ်သုဝေ ချန်းဇမီရှိုင်း ချန်းအောင် ဂျာလတ် စင်ဒီ စည်သူလွင် စတီဗင် စံပီး စူစဲနျနာမငျး ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း ဆလိုင်းလျန်လျန် ဆုန်သင်းပါရ် ဇမ်နူး ညီပုလေး တွင်ကယ်(လ်) ထန်သောင် ထွဏ်းထွဏ်း ထွယ်ဆန်အောင် နီကိုးလက်စ် နီတာ ပိုးဒါလီသိန်းတန် ဖိုးကွိ ဖိုးဖန် ဘရိတ်ကီ ဘိုဖြူ မီးမီးခဲ မီးနို မျိုးကြီး ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရတနာဦး ရှိန်း ရိဘက်ခါ လားဖောဆက် လီယို လီလီမြင့်ှSnow သနျ့ရှငျးသောမီး သိလွှာနု အက်စတာနှင်းပွင့် အငယ်လေး အယ်လီယာ အားလျံ အိုင်နပ်ပေါင်း အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် ကောင်းကောင်း စောဝင်းလွင် စောဖိုးခွား စောမဆာ စောမလေး စောရူဒါမီး စောနိုင်နိုင် ဇော်ဇော်ချစ်နိုင်ဦး ထွေးနု ဒေလီယာထော နောနော် နေနေ လေးလေးဝါး ဟေမာန်မြင့်ဇော်
✟လင်းစေပါ✟ တေးရေး📖-F.သားငယ် ​တေးဆို🎤ဖြူဖြူကျော်သိန်း🎵လင်းစေပါ နိုင်ငံတော်အတွက် လင်းစေပါ ယုံကြည်သူတိုင်း လင်းစေပါ 🎵
Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, October 28, 2016
Contemporary / Video
Wainlar Wainlar Par
Hymns / Video
Koe Lwal U Kyu 031
Contemporary / Male Singers / Music / Video
Is there an answer
Christmas / Type of Music / Video
A Kicing Hehpihna
Myanmar Gospel Songs © 2021. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Alx | Free Wordpress Themes.